Idaacadda leyska arko ee ETN, oo soo jiidatay Qurbajoogta UK
Qalinkii: Cabdixakiim Jaamac Jooje
Idaacadda leyska arko ee ETN, oo fadhigeedu yahay magaalooyinka Boosaaso iyo Nairobi, ayaa aad iyo aad looga hadal hayaa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee Ingiriiska. Iyagoo dadku ay isweydiinayaan halka ay ka soo baxday idaacaddan. Sida aynu la wada socono waxaa ingiriiska iyo dhammaan dunidoo dhan ay soomaalidu ka yaqaaneen idaacadda Universal oo aad loo daawado, laakiin markii hawada lagu arkay idaacaddan cusub dad baddan ayaa aad ula cajabay, idaacaddan cusub iyo weliba barnaamijyada wax ku oolka ah ee ay soo tabinayso.
Waxaa kaloo dadka soo jiitay sida ay isugu howlaan inay magaalo walboo Soomaalia ah ay kasoo tabiyaan warar muuqaal ah. Waxaa kaloo aad iyo aad muhiim loogu arkaa barnaamijyada arimaha Bulshada, caafimaadka iyo weliba ganacsiga oo ay soo deyso.
Idaacaddan waxaa kaliyo oo laga rabay inay sameyso barnaamijyo ogeysiin ah, oo ay dadka qurgba joogta ah ugu sheegayaan halka ay kasoo galaan iyo waliba kala horeynta barnaamijyadooda. Waxaa kaloo muhiim ah iyadan inay wakiillo ka sameystaan magaalooyinka waaweyn ee Yurub iyo America. Gaar ahaan Ingiriiska oo ay ku nool yihiin Mujtamac Soomaali ah oo aad u fara baddan.
Mar kale waxaan leeyahay hambalyo ETN. Ogaada mar walboo aad ilaalisaan anshaxa wanaagsan iyo wararka cadaalada ku dhisan, idaacadiinu waxey yeelanaysaa sumcad aad u weyn.
Waxaan hadalkeyga kusoo gabagabeynayaa ETN allaha ka dhigo tii Soomaali ugu yeerta waxa wanaagsan, oo xumaantana uga digta. Dhammaan shaqaalaha, wariyayaasha iyo maamulka ETN waxaan idiin leeyahay hambalyo.
Mar walba fadlan halka lagala soo xiriiro maamulka idaacaadd ku soo qora shaashadiina, sidoo kale website soo bandhiga oo lagal socdo arimihiina.